Izingobo Zomlando Zokuzijabulisa Komndeni - IntoKildare
Kunokuningi kwemindeni nabantwana bayo yonke iminyaka abangakubona futhi bakwenze e-Kildare kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isimo sezulu noma indawo. Kusukela kwabancane kuya kwabancane, kunemisebenzi efanela wonke umuntu!
Intsha kanye nabantwana abancane ngokufanayo banokuningi abangakujabulela e-Co. Kildare. Isifunda sigcwele izinketho ezinhle zokuphuma komndeni, kusukela ekuhlanganeni nezilwane ezingavamile kanye nama-kart okugijima e-Clonfert Pet Farm kuya kugalofu ohlanyayo kanye nomugqa we-zip e-Kildare Maze. Okungcono nakakhulu, kukhona ukuzijabulisa kwawo wonke amalungu omndeni e-Irish National Stud edume umhlaba wonke, ehlanganisa ubuhle nokuthula kwezingadi ezimangalisayo nenkundla yokudlala ethokozisayo, ukuhambahamba kwehlathi okubabazekayo kanye nendlela yezinganekwane ekhangayo.